China cycling Medals fekitori uye vagadziri | Kingtai
MAEDHALI anowanikwa mumhando dzakasiyana siyana, kubva pa1 1/4 ″ kusvika pa3 ″ dhayamita.
Vazhinji vane mavara kana goridhe, sirivheri kana bronze apedza.
Bronze bhasikoro medallion uye pateni yakakomberedza, Iine mhete yekubatanidza menduru ribhoni.
Yakatemerwa manyorero kumashure kwemenduru.
Inowanikwa mune yekare goridhe, sirivheri kana bronze (mhangura), aya maMEDALS anoratidza tsvarakadenga yakakomberedzwa nenyeredzi dzakaomarara zvichipa iyi menduru inozivikanwa mukurumbira wakasarudzika uye wakasarudzika.
Chinhu chimwe nechimwe chakazara muhomwe dzeplastiki dzekuchengetedza
Kufanana neyedu yese MAEDHALI, edu MAEDHALI akagadzirwa nesimbi chaiyo alloys pachinzvimbo chepurasitiki.Menduru yega yega ndeyemhando yepamusoro uye ine simba color.Kana iwe uchida kugadzirisa logo, isu tinogona zvakare kukugadzirira iwe, isu tine timu ine hunyanzvi vagadziri
Pashure: MADZIMAI ANOBIKWA
Zvadaro: MADHAMU OKUTAMBO